Ogaden News Agency (ONA) – Dr. Merera Gudina oo sheegay in aysan Itoobiya nabad galyo & xasiloonk ka jiri karin.
Dr. Merera Gudina oo sheegay in aysan Itoobiya nabad galyo & xasiloonk ka jiri karin.
Posted by Daljir	/ October 28, 2015
Dr. Merera Gudina oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaardaka ee loo yaqaano Oromo Federalist oo isla markaana ah hoogamiyaha ugu cad cad ururada mucaaradka ah ee ka hawl gala gudaha Itooniya ayaa waraysi u siiyay TV-ga mucaaradka ee Esat Tv sidaas ku sheegay.
Dr. Merera Gudina ayaa warysiga ku sheegay in aysan Itoobiya nabad galyo & xasiloonk ka jiri Karin maadama u ururka TPLF/EPRDF af duub wadanka ku haysto, isla markaana aysan ka jirin doorosho xor ah cadaalad & sinaantoona.
Waxa kale oo u Dr. Merera intaas ku daray wadamada ay kaligood taliyayaashu ka taliyaan in ay ku danbeeyaan halaag bur bur & xasilooni daro sida maantaba meelo badan oo aduunka ah ka taagan.
Mucaaradka Gudaha si arimaha murugsan ee taliska Addiss Ababa wax looga qabto ayaa waxay wax la dhaqaajin la’yihiin kadib markii ay EPRDF ku fashilantay 25 sano oo awood military loo adeegsaday in shacabka lagu maquuniyo.
Waxaynu wada xasuunahay in mudo 3 todobaad ah laga joogo in ay u ra’isul wasaaraha Itoobiya u ku marti qaaday ururada Mcaaradka in ay ka soo shir wada tashi ah halkaas oo asxaabtii mucaardka ahi ay gaashaanka ku dhufteen mashruuca EPRDF ayaa waxaa kamid ah Blue Party, Madrek, Arena. Axsaabtan oo ahaa kuwii kaqaybgalay doorasho kusheegtii ay EPRDF ku shubatay ee lamusuqay natiijadii kasoo baxday. EPRDF ayaa doonaysa ineey beesha caalamka iyo shacabka Itoobiya lagu marin habaabiyo si wakhti loogu dheeraysto.